သူ့အရိပ်နှင့် မှ ကိုယ်ဟာ
ဖူးဟယ် ပွင့်ဟယ် ဆေးဖက်ဝင်နေမိတာ။
ပြေရာပြေကြောင်း မေတ္တာစာပဲ ရွတ်ရတော့မလိုလို
စာတွေ ကဗျာတွေ မရေးဖြစ်တာကြာပါပြီ။ ဘယ်သူ့အိမ်ရယ်မှ မရောက်ဖြစ်တာလည်းကြာပါပြီ။
လတ်တလော ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ။ပုံလေးကို ဒီနေရာလေးက ယူပါတယ်။
Posted by ခိုင်နုငယ် at 7:30 PM 39 comments: Links to this post
မင်းကို ချစ်မိနေကြောင်း ပြောပြချင်တယ်။
စားကြွင်း♥ ♥ဘာရယ်မဟုတ် ဘလောပ့်လေးမှိန်နေတာနဲ့ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ဖတ်မိတာလေးတွေကို ကဗျာစပ်ကြည့်တာပါ။ အစပ်အဆက်မတည့်တာတွေကို ဆက်စပ်နေမိသလားရယ်........:) :) :)
Posted by ခိုင်နုငယ် at 7:55 PM 26 comments: Links to this post
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ထုတ်ဝေသည့် မြန်မာ့ သတင်းကွန်ယက်ဂျာနယ်ပါ။ အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးတွေကြားကရွှေမြန်မာ တို့အတွက် ရပ်ဝေး မြေခြားမှာ သတင်းကွန်ယက်တွေနဲ့ နီးစပ်စေဖို့ စာပေချစ်မြတ်နိုးသည့် မလေးရှား နိုင်ငံရောက် ရွှေမြန်မာတို့ရဲ့အားထုတ်မူ့လေးပါ။ ယခုဆို မလေရှားနိုင်ငံမှာ မြန်မာ့သတင်းဂျာနယ်တွေ တော် တော်များများ ထွက်ရှိလို့နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် စာပေချစ်မြတ်နိုးသည့် မလေးရှားနိုင်ငံရောက် ရွှေညီအကိုမောင်နှမ များ “သတင်းကွန်ယက်ဂျာနယ်” ကိုလည်း ၀ယ်ယူဖတ်ရူ့နိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးလိုက် ပါရစေ။ တဆက်တည်းမှာပဲ ကြော်ငြာသလိုလိုနဲ့ ကြွားလိုက်ပါအုံးမယ်။ :) :)
ကျွန်မ မတောက်တစ်ခေါက်ရေးသည့် ၀တ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုလည်း ဖတ်ရူ့နိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါး လိုက်ပါရစေ။ ကျွန်မ မတောက်တစ်ခေါက်ရေးသည့် ၀တ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ကို ထုတ်ဝေပေးသည့် သတင်းကွန်ယက်ဂျာနယ်မှ အယ်ဒီတာများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ဒီနေရာလေးကနေ ကျေးဇူး စကားပြောပါရစေ။ “သင်းကွဲငှက်တို့ အိမ်အပြန်” မူးရင်းကို ဖတ်ချင်သူများ ဒီနေရာလေးမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
၁) ပညာဒါန အခမဲ့သင်တန်းကျောင်း ကြော်ငြာများ
၂) လူပျောက် ကြော်ငြာများ
၃) ပါတ်စ်စပို့ ပျောက်ဆုံးသူများနှင့်ကောက်ရသူများ
၄) မိသားသားစုနှင့် အမှန်တကယ် ဆက်သွယ်ရန်အရေးကြီးနေသူများ
၅) အိမ်ခန်းရောင်း/၀ယ်/ငှားလိုသူနှင့် အငှားတင်လိုသူများ
၆) တီဗွီ၊ရေခဲသေတ္တာ၊ဟမ်းဖုန်း၊ဆိုင်ကယ်၊ကား ရောင်း/၀ယ်/ငှား လိုသူများ
စသည့် ကြော်ငြာရှင်များ အခမဲ့ ထည့်သွင်းကြော်ငြာပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါရစေ။ အခမဲ့ကြော်ငြာဏ္ဍသို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့လိုပါက အမည်၊ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်နှင့်တကွ ကြော်ငြာထည့်သွင်း လိုသော အကြောင်းအရာအား လျှောက်လွှာစာရွက်ဖြင့်ရေး၍ စာတိုက်မှဖြစ်စေ၊ အီးမေး(လ်)ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့် ဖြစ်စေ၊လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်- P.O BOX:10967,50730(K.L)
Ph:016-659 8531,016-977 8317
အမှာ။ ။ယခုတလော အလုပ်များတာရယ်။ စိတ်မအားတာရယ်ပေါင်းစုပြီး ဘလောပ့်လည်ဖို့ မိတ်ပျက်ဆွေပျက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘလောပ့်လာလည်သည့် ချစ်မိတ်ဆွေ စာဖတ်သူများကိုလည်း ဧည့်ဝတ်မကျေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့် ကြိုးစားပြီး ဘလောပ့်လည် စာဖတ်စာရေးပါအုံးမည်လို့။ :) :)
Posted by ခိုင်နုငယ် at 1:47 AM 25 comments: Links to this post
Labels: ၀တ္ထု, မျှဝေလိုသောစာစု, ကြော်ငြာ
ငါ့ရင်ခွင်မှာ မင်း တစ်ကိုယ်စာလေးတောင်
ခိုလှုံ ခွင့် မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။
ငါဟာ “တေမိ” မဟုတ်သလို
ဤ သည် မရွေး ငါကိုယ်တိုင်လည်း
ငါဟာ မင်း မျှော်လင့်တဲ့ အိန်လ်ဂျယ်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကွယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ ငါ့ကိုချစ်ရင် မုန်းလိုက်ပါ။
Posted by ခိုင်နုငယ် at 6:40 PM 32 comments: Links to this post
ဖေဖေ့ အရိပ်လေးလောက် လုံခြုံနွေးထွေးမူ့ မရှိခဲ့ပါဘူး။
“အသဲ” မာတတ်တဲ့ ဖေဖေ့သမီး ဂျစ်ကန်ကန် ကောင်မဆိုးလေးဟာ
ဖေဖေနှင့်အတူ ကောင်းကင်ပြာပြာတွေထဲ စွန်လွှတ်ချင်သေးတယ်။
Posted by ခိုင်နုငယ် at 6:55 PM 29 comments: Links to this post
Labels: ကဗျာ, ရင်ဘတ်ထဲကအလွမ်းအချို့
Posted by ခိုင်နုငယ် at 7:28 PM 28 comments: Links to this post
ရွာထဲမှာ စီကနဲ …..ညံကနဲဆို…ဦးအမ်းပွားပဲ။ ဥပုသ်သတင်းသီလ ဆောက်တည်ရက် ၀ါတွင်းကာလ…. အခါကြီး ရက်မြတ်များဆိုလျှင် ပိုဆိုးသေးတယ်။ ဦးအမ်ပွားရဲ့ နာမ်မည် ပည့်ညတ်ထား ပုံကိုလည်း နည်းနည်းလောက် တော့ပြောပြချင်သေးတယ်။ ဦးအမ်ပွားဆိုတာက ခေသူမဟုတ် လာမထိနဲ့..ဇရှိတယ်ဆိုတဲ့ လူစားမျိုး ငယ်ငယ်က ……….ကလေးချင်း ရန်ဖြစ်တာခဲချွန်နဲ့ တစ်ဖက်ကလေးက ခေါင်းကိုထိုးတာ ခေါင်းမပေါက်ပဲ ….ခဲစံသာကျိုး သွား သတဲ့။ ဒါအပြင် ဘယ်ကမတုန်း ခဲတံချွန်တဲ့ ဓါးနဲ့ခေါင်းကိုပေါက်တာတောင် သွေးမထွက်ပဲ အရာထင်ယုံပဲရှိသတဲ့။ ကာလသားအရွယ်က… ထန်းပင်ပေါ်ထန်းသီးတက်ချိုင်တာ (ခူးတာ) ပေနှစ်ဆယ်သုံးဆယ်လောက်ရှိတဲ့ ထန်းပင် အမြင့်ပေါ်က ပြုတ်ကျတာတောင် ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့။ ဦးအမ်ပွားမှာ ငယ်သွားတွေလဲတော့သွားအပိုအမ်ပွားပါလာ တယ်လို့ လူကြီးတွေပြောတာကြားသား။ အမ်းပွားပါရင် တုတ်၊ဓါးပီးတယ်ဆိုပဲ။မယုံမရှိနဲ့ပြောမယုံကြုံဖူးမှသိတဲ့။
ဦးအမ်ပွားသရုပ်ကို ဖော်ပြရရင်လည်း လူကထောင်ထောင် မောင်းမောင်း အသားက ညိုညိုတိုတိုနှင့် ဆံပင်ရှည် ဘယ်တေ့ာမှမထားဘူး။ ကတုံးရောင်မှာ ဆီပြောင်တ၀င်းဝင်းနှင့် လက်မောင်းကြွက်သားကြီးတွေဆိုအားကောင်း မောင်းသန်ကလေး လေးငါးယောက် ခိုစီးလို့ရတယ်။ ခြေသလုံးကြီး တွေဆို တုတ်ခိုင်နေတာပဲ။ အဖေက ကရင်၊ အမေကဗမာ ကပြားစပ် မွေးထားတော့ လူကောင်းကြီးက ထွားလိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း။ ဦးအမ်ပွား အဖေဖြစ်သူ က လည်း ကရင်နီစပ်ဗေဒင် ရောင်ရောင်၊ ဆရာသမား ရောင်ရောင်ဆိုပါတော့။ ဦးအမ်ပွားအဖေ မသေခင်က သိုင်းပညာအခြေခံလေးတတ်ထားတေ့ာ …….. ဦးအမ်ပွားခြေထောက် မြေကြီးမကျဘူး။
အင်းရွာဆိုတာကလည်း မြို့မနီးတောမကျ ရွာ့ဇနပုဒ်ဆိုတော့ အိမ်ခြေရှိလှ….…(၁၅၀) အလွန်ဆုံးပေါ့။ ရွာကလေး ထဲ တုတ်ပီး၊ဓါးပီး ခပ်မိုက်မိုက် အမ်ပွားရယ်လို့ နာမ်မည်ကြီးသေးတာ။ ရွာထဲက ကာလသားမှန်သမျှ သူ့ယှဉ်ဖိုက်
ရဲတဲ့သူ တစ်ယောက်မှမရှိဘူး။ စိမ့်နေ ဖိန့်နေအောင်ကိုကြောက်ကြတာ။ ရွာထဲမှာကလည်းဓါးသိုင်းမပြောနဲ့တုတ် သိုင်းတောင် ကောင်းကောင်းဝှေ့ယမ်း တတ်သူမရှိ။ အင်းရွာလေးမှာက တောင်သူလယ်လုပ်ဆိုတော့ မနက် နွား တစ်ရှဉ်းနှင့် လယ်တောထွက်….ပြန်လာမိုးချုပ်…...မနက်ဖက် လယ်တောပြန်ထွက် ဒါနဲ့ပဲလုံး လည်ချာလည်လိုက် ဂျာအေးသူ့အမေရိုက်ဖြစ်နေတာ။
ဦးအမ်ပွား ကတော့ မနက်ဝေလီဝေလင်း သူများတွေ နွားတစ်ရှဉ်းနှင့် လယ်တော ထွက်ချိန်မှာသူ ကဓါးရောင် တ၀င်းဝင်းနဲ့ ဓါးရေးပြကာ သိုင်း ကျင့်လို့ကောင်းတုန်း။ တစ်ခါတစ်လေ များဆို ပါးစပ်ကလည်း စည်းချက်လိုက် သေး တယ်။ ဗွီဒီယို ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေထဲက ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဖိုက်တင်ခန်းတွေထဲကလို……...…“ယား …….… ယား …….. ဖောင်း”အဲသလိုတွေတောင် ပါလိုက်သေးတာ။ နေကလေးအတော်….မြင့်လာရင်တော့ နေရောင် အောက်မှာ မည်းနက်နက် ကျောပြင် ထက်ဆီက တလက်ချွေးသီး၊ ချွေးပေါက်ကြီးတွေ လိမ့်ဆင်းနေပုံမှာ ကြည့်မြင်သူ ငေးရတယ်။
ဦးအမ်ပွားက နဂိုနေ မြွေးပွေးလိုလူ။ ရစ်ရွှေရည်ကလေး ၀င်လာရင်တော့ သွားမစမ်းနဲ့ မြွေဆိုး။ ကလိတောင် မထိုးဝင့်။ သူများတွေလို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သောက်ရုံနဲ့မူးတတ်သူမဟုတ်။ သုံးလေးလုံးလောက် သောက်ပြီးကာမှ အာသာပြေတတ်သူ။ မူးလာရင်တော့ သူ့ရစ်သလိုလို၊ငါ့ရစ်သလိုလို စိတ်ချဉ်ပေါက်ရင် ရွာရိုးလျှောက်မိုက်တဲ့ သူ ထွက်ခဲ့ရယ်လို့ ရွာဆော်လူမိုက် လုပ်လိုက်သေးတာ။ ရွာထဲအငိုသန်တဲ့ ကလေးများ ဦးအမ်ပွားလာပြီရယ်လို့သာ ခြိမ်းခြောက်လိုက် ငိုနေတဲ့ကလေး ချက်ချင်းအငိုရပ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခပ်ငယ်ငယ်ဆို ဦးအမ်ပွား အသံကြား လိုက်တာနှင့် တစ္ဆေသရဲလို ချီးယိုမတက်၊သေးထွက်မတက်ကို ကြောက်ကြတာ။ ဒါပေမယ့် ဦးအမ်ပွားက ကလေး အရမ်းချစ်တတ်တာ။ ကလေးတွေမြင်ရင် ပါးကြီးတွေ ဆွဲဖြစ်ကာ အတင်းပွေ့ချီတော့တာ။ ကလေးတွေ ကလည်း ဦးအမ်ပွားဆို တစ္ဆေသရဲလို သူ့လက်ထဲ ရောက်တာနှင့် အကြောက်အကန် ငိုတော့တာ။ တစ်ချို့ကလေးများဆို ဖျားတောင် ယူတယ်။ သူ့မိန်းမ အရီးမကြွေး ကလည်း မိန်းမအမြုံလားတော့ မပြောတတ်။ ဦးအမ်ပွားနှင့် ရတာ ဆယ်နှစ် တောင်ကျော်လာပြီ ကလေးတစ်ယောက်မှ မရသေး။ တစ်ခါတစ်လေ ဦးအမ်ပွားအရွန်း ဖောက်ကာ မိန်းမဖြစ်သူကို………..
“မိကြွေ ငါ့ကလေးတစ်ယောက်လောက် မွေးပေးစမ်းဟာ။ နင့်မလည်း ၀ါးကင်းပိတ်ကြီးကျနေ
တာပဲ။ ဘယ်တော့ ကလေးရမတုန်း။ သူများကလေးတွေ ချစ်ရတာချစ်မ၀ဘူးဟ။ ကလေးတွေ
အရီးမကြွေသူ့ထိတော့ ကက်ကက်လန်လန် အောင်ယောကျာ်းဖြစ်သူကို ရန်တွေ့လေသည်။
“ကျုပ် တစ်ယောက်တည်းကြောင့်တော့ ဟုတ်ဟန်မတူပါဘူးတော်။ တော်လူဖြစ်ကံမပါတာ
ရှိမပေါ့။ ကလေးတွေ တော့လက်ထဲ မပျော်တာမကြည့်နဲ့ တော်က လူ့ဘီလူး၊ လူ့သဘက်ကြီး
အရီးမကြွေ ပြောမယ်ဆိုလည်း ပြောလောက်စရာ ဦးအမ်ပွားက အကုသိုလ် အလုပ်နှင့် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလာသူ။ သူများအသက် မျိုးမျိုးမြတ်မြတ် ကလေးမှ မသက်လိုက်ရလျှင် နေမထိ ထိုင်မသာဖြစ်နေတတ်သူ။ သတင်းသီလ အခါကြီး ရက်မြတ်များဆို အဖိတ်နေ့ မတိုင်ခင်ကပင် ဟင်းကောင်ရှာထားတာ အဖိတ်နေ ရောက် တာနဲ့ ၀ယ်ထားတဲ့ သားကြီးငါးကြီးအမဲ၊၀က်ကိုသတ်ပြီး ဟင်းလုပ်ကာ ရောင်းတယ်။ ထိုနေ့များဆိုရွာထဲမှာ ဆူဆူ ကျွက်ကျွက် ခွေးတအူအူနဲ့ ဦးအမ်ပွား အိမ်မှာတော့ လူဝင်လူထွက် စည်ကားလို့မဆုံး။ ဥပုသ်နေ့မှာ ဆွမ်းဟင်းကလေး ကောင်းကောင်း မွန်မွန်နဲ့ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း ပို့ချင်ရှာတော့ အင်းရွာကလေးက အိမ်ရှင်မတွေ အတွက် ဦးအမ်ပွားက မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေသူ ဖြစ်နေပြန်ရော။ မြို့မနီးတောမကျ ရွာ့ဇနပုဒ်ဆိုတော့ ဦးအမ်ပွား ဟင်းမလုပ် လို့အသားငါး အဆက်ပြတ်နေတဲ့ ချိန်ဆို ရွာ့လက်ဖြစ် အသီးအရွက်နဲ့ပဲ ပြီးရှာကြတော့တာ။
ဦးအမ်ပွား ဟင်းကောင် ကြီးကြီးမားမား ရှာမရတဲ့အခါမျိုးဆို ရွာချောင်ဘေး ဆေးလိပ်တစ်တိုနဲ့ ငါးသွားထိုင် မျှား နေလေ့ရှိတယ်။ ဥပုသ်နေ့ဆို ရွာကလေးက ကြီးကြီး၊ငယ်ငယ် လူရွယ်လူလတ်ကအစ တောင်ယာလုပ်ငန်းခွင် အ လုပ်ကိုနားကာ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သီလယူလေ့ရှိတယ်။ သူများယောကျာ်းတွေ ဘုရားသွား ကျောင်းတက် မြင်တော့ အရီးမကြွေ လည်း သူ့ယောကျာ်းကို ဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်ဖူး စေချင်တယ်ထင်ပ။ငါးမျှားတံကိုင်ကာ
လှေကားအဆင်း ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဦးအမ်ပွားကို လှမ်းကာပြောလေသည်။
“တော့် အကုသိုလ်တုန်းကြီး သူများတွေဘုန်းကြီးကျောင်း သွားကြတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း
ရောက်ဖူးတယ် ရှိအောင်၊ ဥပုသ်သီလ သွားယူချေပါလား။ မုဆိုးတစ်သက် မက်တစ်ချက်တဲ့
တော့်မှာတော့ အကုသိုလ် အလုပ်တွေနှင့် အချိန်ဖြုန်းနေတာ လူဖြစ်ရှုံးလိုက် ပါဘိတော်”
အရီးမကြွေ ပြောလည်းပြော ဖက်ကြမ်းဆေးပြင်းလိပ်တိုကြီးကို အားကုန်ခဲကာ ခပ်ပြင်းပြင်း
“အမ်ပွား ရာဇ၀င်မှာ မိုက်ချင်လည်း ကမ်းကုန်အောင် မိုက်တယ်ဟေ့။ ပါးစပ်က ဘုရား၊ဘုရား
လက်က ကားယား လုပ်မနေနိုင်ဘူး။ နင့်ဟာ နင်သွားချင်သွား”
ပြောပြောဆိုဆိုအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားလေသည်။ကျွန်တော်တို့ အမှတ်သညာ ရှိခဲ့သည့် အချိန် ကစလို့ ဦးအမ်ပွား ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားတာတစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူး။ ဟိုဘက်ရွာ ဒီဘက်ရွာသွားလို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝိုင်းတွင်းက မ ဖြစ်မနေ လမ်းဖြတ်လျှောက်ရမယ်ဆို အဲဒီလမ်းခရီး ဘယ်တော့မှ မသွားဘူး။
တစ်နေ့တော့ ဦးအမ်ပွား ဦးမြတ်သာအိမ် ဘက်လျှောက်သွားလေသည်။ ဟင်းကောင်းကလည်း ရှာမရ သူမေး ငါ မေး ဦးအမ်ပွား ဟင်းမလုပ်ဖူးလား၊ အမ်ပွားဟင်းရှာမရဘူးလား။ တစ်ယောက် တစ်မျိုးမေးကြတော့။ နဂိုကမှ သူ များအသတ် မသတ်ရရင်နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်နေတတ်သူဆိုတော့ကာ။ ဟင်းကောင်းရှာမရသည့်အဆုံး။
“ဗျို့ ကိုမြတ်သာ ခင်ဗျားနွားအိုကြီး အမဲထုရအောင်ပါဗျ။
ပုဆိုးတိုတို အကျီဗလာနှင့် ညီလေးမောင်နှင့် နှစ်ယောက်သား အိမ်ဝိုင်းထဲဝင်လာကြလေတယ်။ ထိုနွားနှင့် ပါတ် သတ်ပြီး ဦးမြတ်သာတို့ သားအဖ နှစ်ယောက် စကားများထားကြလေသည်။ သားဖြစ်သူက ချည်တိုင်တွင် အချိန်ကုန်နေသည့် နွားအိုကြီးကို ဟင်းလုပ်ကာ အမြတ်ယူချင်သည်။ ဦးမြတ်သာက ထိုသို့မဟုတ် တစ်သက်လုံးက ခိုင်း လာခဲ့သည့် နွားကို အသုံးမ၀င် တော့ကာမှ အမဲထုကာ ဟင်းလုပ်ပြစ်ရင် နွားလောက်မှ အသိဥာဏ်မရှိသူ လူ့တိရစ္ဆာန်တော့ အဖြစ်မခံ နိုင်ဟုဆိုလေသည်။ ခိုင်းလို့ကောင်းချိန် တုန်းကတော့ ချိုကလေးပွတ် နွားရွက် ကလေး သပ်ကာ ပခုံးတွေပေါက်ဝင်သည်ထိ ခိုင်းလာတာ။ နွားထမင်းကျွေးရတာ မဟုတ် မြက်ကျွေးတာ သူ့တမ်း ကုန်လို့သေနေ့စိရင် ချည်တိုင်မှာပဲ သေပစေဟု ပြောလေသည်။
“မရောင်းဘူးကွာ သူ့သေနေ့စေ့ရင် ချည်တိုင်မှာပဲ သေပါစေ”
ဦးမြတ်သာက ဦးအမ်ပွားကို တိုတိုပြတ်ပြတ် အဖြေပေးလိုက်လေသည်။
“ဦးလေးမြတ်သာကလည်း တိရစ္ဆာန်ဆိုတာ လူချွတ်မှ ကျွတ်တာပါဗျ ရောင်းလိုက်ပါ။ ဦးလေးအမ်ပွား ဟင်းကောင်ရှာမရ ဖြစ်နေတာနဲ့ အတော်ပဲပေါ့။ နွားအိုကြီး ချည်တိုင် မှာအချိန်ကုန် နေမဲ့အတူတူ အမြတ်ရအောင် ရောင်းလိုက်ပါဗျ။ ”
ညီလေးမောင် ပါဝင်ကူပြောလေသည်။ ညီလေးမောင် ဆိုတာကလည်း ဦးအမ်ပွားမှာ ကူဖော် လောင်ဖက် သားသမီး မရှိလေတော့ ညီလေးမောင်ကို တပည့်ကျော် သားအဖြစ် လက်သပ်မွေးထားတာပေါ့။ သူကြီးမှီပြီး ပါဝါ ပြတာ ညီလေးမောင်လို လူမျိုးကိုပြောတာဖြစ်မယ်။ ဦးအမ်ပွားမြှောက်စားထားတော့ ညီလေးမောင်တစ်ယောက် တောက်ကြွားနေတော့တယ်။ ဦးမြတ်သာကလည်း ညဦးကတည်းက သားအဖနှစ်ယောက် စကားများထားသည့် အရှိန်ကမပြယ်သေး။ ညီလေးမောင်ကို ခပ်စူးစူးကြည့်ကာ…..
“မင်းအဲသလောက် အကျိုးအမြတ် လိုချင်နေရင် မင်းအသားလှီးရောင်းလိုက်ပါလား”
ဦးမြတ်သာကလည်း ရွာမှာဆယ်အိမ်မူး ဘုရားတရားအင်မတန် ရိုသေကိုင်းရှိုင်းသူ အနေမှန်သူ လူအေးသမား စကားကိုကွေ့ဝိုက်ကာ မပြောတတ် တိုတိုပြတ်ပြတ် တည့်တိုးလိုရင်းသမား ဦးအမ်ပွား ချိတ်မရှိပဲ ချိတ်မရ လေ မှန်းသိတော့။နောက်ထပ်တစ်ခွန်းမှ ဆက်မဟတော့ပဲ။
“ဟေ့ကောင် တော်တော် ပြန်မယ်”
ဦးအမ်ပွား ညီလေးမောင်ကို အချက်ပြကာ ချာကနဲအိမ်ဝိုင်းထဲက လှည့်ထွက်သွားလေသည်။ ဦးအမ်ပွား ထွက် သွားအပြီး ဒေါသအငွေ့ လှိုင်းတို့သည် ကျန်နေခဲ့သူတို့အား ရိုက်ခတ်နေလိမ့်မည်ဆိုတာ ဒေါသတကြီး လှည့်ထွက် သွားသော ဦးအမ်ပွားကို ကြည့်ရုံဖြင့်မြင်သာ၏။ ညနေဘက် ရောက်ချိန် မှာတော့ ဦးအမ်ပွား လက်ထဲချိုတထောင် ထောင်နဲ့ ခိုင်းနွားကြီး တစ်ကောင် လည်တခါခါနဲ့ ပါလာတယ်။ ဦးမြတ်သာအိမ်ရှေ့ဖြတ်ဆွဲကာ..
“အမ်ပွားရာဇ၀င်မှာ မရှိဘူး မရဘူးဆိုတာ မရှိဘူးဟေ့။ ဘုရားရောင်ရောင် တရားရောင်ရောင်
ဦးမြတ်သာကို အရွဲ့တိုက်ကာ ခပ်ကျယ်ကျယ် အော်ပြောနေလေသည်။ အင်းရွာတောင်ဘက် ဒန်းဒေါင့်ရွာက ခိုင်းနွားကြီးကို မတန်တဆပေးဝယ်လာခဲ့သည်ဟု ရွာကလေးထဲတီးတိုး သဖန် ပိုးထိုး နေကြလေတယ်။ မည်သူမှ မကိုင်ဝင့် ကျွတ်ဆတ်ဆတ် လည်တခါခါဖြစ်နေသည့် နွားမို့ နွားရှင်ကလည်း မကိုင်ဝင့် နွားကလည်း ရာဇ၀င်နဲ့ ဦးချို တသွေးသွေး ရွာထဲကကလေး ချိုဖျားနှင့် အခတ်ခံရသည်မို့ လျော်ကြေးပါ ပေးထားရသည်ဟုဆိုတယ်။ ညနေစောင်းတော့ ကျွတ်တသပ်သပ်နဲ့ နွားကိုရှေ့ကဆွဲကသူဆွဲ ဒန်အိုးဒန်ခွက် လက်နက်ကရိယာ အစုံ အလင်နဲ့ ရွာချောင်းထဲ တစ်သိုက်ကြီး ခွေးတအူအူနဲ့ဆင်းသွားကြလေရဲ့။
“ရော့ကွာ ညီလေးမောင် မင်းထု” ဟုဆိုကာ ဦးအမ်ပွား ညီလေးမောင်ကို ဓါးနှင့်ပေါက်ဆိန် လှမ်းကာ ပေးလေ သည်။ ဦးအမ်ပွားကတော့ နွားဝယ်အ၀ယ် တည့်လာခဲ့သည် ဆိုတော့ကာ ရစ်ရွှေရည် ကလေးဝင်ထားသည်မို့ အရှိန်မပျက် လက်ကျန် ပုလင်းလေး ခါးထိုးကာ မော့လိုက် ခါးကြားထဲ ပြန်ထိုးလိုက် လုပ်ကာ စည်းဇိမ်ခံ နေလေ သည်။ ချောင်းကိုင်းခင်းစပ် ငုတ်တိုင်တွင် ချည်ထားသော နွားရဲ့ ဒူးခေါင်းခွက်ကို ညီလေးမောင် ဓါးမတိုနှင့် အားကုန် ခုတ်လိုက်လေသည်။ နွားလည်း ခွေကနဲ လဲကျသွားပြီး ကုန်းရုန်းထကာ မြင်သမျှ လိုက်ကာ ဝှေ့(ခွေ့) နေတော့သည်။
“ဟေ့ကောင် ညီလေးမောင် မင်းကို ငါလက်ထပ်သင်ထားတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီတုန်း။
ဟုဆိုကာ ဦးအမ်ပွား သူ့ဆီပြေးဝင်လာသော နွားရဲ့ လည်မျိုကို ဓါးမြောင်နှင့် အဆက်မပြတ် ဆင့်ကာ ထိုးလေ သည်။ နွားနှင့်လူ သဲသောင်ပြင် ပေါ်မှာ တွေ့နေကျလေပြီ။ အမဲကူဖျက်ဖို့ စောင့်နေကြသည့် လူအုပ် ဟင်းလာ ၀ယ်ကြသည့် လူအုပ်ကြီးသည် နွားနှင့်လူ လုံးထွေးနေသည့် အသတ်လုပွဲကို မှင်သက်မိနေကြသည်။ သဲမှုန် သဲပွင့်တို့ တစ်ထောင်းထောင်းကြားမှာ နွားနှင့်လူ၏ အသတ်လုပွဲ တဖြေးဖြေးနှင့် ငြိမ်ကျသွားလေသည်။ နွား လည်းဟန်ချက်ပျက်ကာ သဲသောင်ပြင်ပေါ် ဘိုင်းကနဲ လဲကျသွားလေသည်။ ဦးအမ်ပွားကတော့ သဲသောင်ပြင် ပေါ် မားမားကြီး မတ်တပ်ရပ်နေရင်းက သွေးသံရဲရဲနှင့် ထိုးကျသွားလေသည်။
ရပ်ကြည့်နေသော လူအုပ်ကြီးထဲမှ လူငယ်တစ်ယောက် ပြေးကာ အရီးမကြွေကို သတင်းပို့လေသည်။
“ဗျို့ အရီးမကြွေ ဦးအမ်ပွား နွားဝှေ့ (ခွေ့) ခံရလို့ အရီးလုံချည်တစ်ထည်ယူခဲ့ပါတဲ့”
အရီးမကြွေပြာပြာသလဲ “ ဟုတ်ကော ဟုတ်ရဲ့လားဟယ်။ ငါ့ကိုနောက်နေတာလား”
အရီးမကြွေယုံနိုင်ဖွယ်မရှိ။ သူ့တစ်သက် ဦးအမ်ပွား သားကြီး၊ငါးကြီး သတ်လာတာ အံတိုနေပြီကော။
“အရီးကလည်းဗျာ……နောက်စရာလား ဟိုမှာ…ဦးအမ်ပွား အသက်မထွက်ပဲ တန်းလန်းကြီး
မို့ အရီးလုံချည် ယူခဲ့ခိုင်းနေတာ”
အမ်ပွားပါသူတို့သည် အသက်ပြင်းကြသလို အသက်ထွက်ကာနီး အချိန်ဆွဲနေတတ်ကြ၏။ ထိုသူကို မိန်းမလုံချည် အုပ်လိုက်မှ အသက် ဖြောင့်ဖြောင့် ထွက်နိုင်သည်ဟု ဆိုတော့ကာ။ အရီးမကြွေ လုံချည်ခေါက် ကလေးကို ကိုင်ကာ ကိုင်ကာအပြေး ကလေး ချောင်းထဲ ရောက်ချိန်မှာတော့။ချောင်းထဲမှာ လူသွေး နွားသွေး အိုင်ထွန်းကာ သွေး အိုင်ထဲ လဲနေတဲ့ ဦးအမ်ပွား ပါးစပ်ကလည်း “ထုကွ…….သတ်ကွ……ရိုက်ကွ” ရေရွတ်ရင်း အသက်မထွက် နိုင်ပဲ ရှိလေသည်။ ဦးအမ်ပွား၏ လည်မျိုတစ်ခုလုံး နွားချိုရာ ဒလပွနှင့် ငါးမွန်းထားသလို ၀မ်းဗိုက်တစ်ခုလုံး ရှိသမျှ အူတို့ စုပြုံကာ အပြင်ထွက်နေသည်မှာ ကြည့်မြင်မကောင်း။ အမ်ပွားအပိုကြောင့် ဦးအမ်ပွား အသက်မထွက်နိုင်ပဲ ရှိလေသည်။ အရီးမကြွေ ကြာရှည် ရပ်ကြည့်မနေနိုင်တော့ ဦးအမ်ပွား မျက်နှာပေါ် လုံချည်ခေါက်ကလေး တင်ပြီး ချိန်မှာ“ထုကွ …….ရိုက်ကွ…………သတ်ကွ” ညာသံပေးရင်း အသက်ထွက်သွားရှာလေသည်။
အရီးမကြွေ ယောကျာ်းဖြစ်သူကို ကြည့်ကာ “တော့် အကုသိုလ်တုံးကြီး ဘ၀ကူးမကောင်းလိုက်
ပုံများ သေတာတောင် အသိတရား ရမသွားရှာဘူး”
အရီးမကြွေ၏ ငိုသံတို့သည် ချောင်းကလေးထဲ ပဲတင်ထပ်နေလေတော့သည်။
စာကြွင်း....၀ါတွင်းကာလ ဥပုသ်သီတင်း သီလဆောက်တည်ရက် ရောက်ပြီမို့ တောရွာဓလေ့ကို သတိရမိလိုက်တာနှင့် ကြားဖူးနားဝ ရှိနေခဲ့ဖူးသည့် အဖြစ်အပျက်လေးကို အခြေခံပြီးရေးဖွဲ့ထားတာပါ။ ကျွန်မသည်လည်း အညာသူပီပီ မတောက်တစ်ခေါက် ရေးမိနေသော ပိုစ့်လေးတွေသည် ကျေးလက်ရနံ့ပါ နေသောကြောင့် စာဖတ်သူအများစုက ကြိုက်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်မရေးသည့် မတောက် တစ်ခေါက် လေးတွေကို သူ့အိမ်သွားလည်၍ အားနာ၍သော်လည်းကောင်း ခင်မင်မူ့အရသော်လည်းကောင်း။ နှစ်သက်သော်ရှိ၊ မနှစ်သက်သော်ရှိ အရောက်လာကာ ဖတ်ရူ့ပေးခြင်းကို သုံးနေကျ စကားလေးပဲ ထပ်ခါသုံးလိုက်ပါရစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှော်။
Posted by ခိုင်နုငယ် at 9:42 PM 24 comments: Links to this post
Posted by ခိုင်နုငယ် at 6:24 PM 26 comments: Links to this post
တိုးဖွဖွတိုက်ခတ်လာတဲ့ လေပြည်လေညင်း နုအေးအေးလေးတွေကို အားပါးတရ ရှူးရှိုက်လိုက်မိတယ်။ ဒီလိုသဘာဝက ပေးတဲ့ လေနုအေးတွေကို ရူရှိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာ တစ်ပါတ်မှာ တစ်ရက်သာ ခံစားခွင့်ရှိတာ။ နေ၀င်ချိန် ဆည်းဆာညနေခင်းရဲ့ အလှတရားတွေ မြင်ကွင်းရှေ့ဆီက မျက်စိတစ်ဆုံး လှမ်းမြင်နေရတဲ့ ဆီအုန်းတောဆီက အခတ်အလတ်ခြင်းထိခတ်ပွတ်တိုက် ကလူကျီစယ်သံလေးတွေ ဆီအုန်းတော ထက်ကဆီကနေပျံသန်းနေကြတဲ့ ငှက်ကလေးတွေ အုပ်စုလိုက်ပျံသန်းသွားလာကြနေသလို တစ်ချို့က အုပ်စုကွဲကာ နှစ်ကောင်သုံးကောင်စုပြီး ပျံသန်းနေကြတာတွေ လမ်းကြားလေးထဲ ဖြတ်သန်းသွားလာနေတဲ့ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စ လူတွေ ဆိုင်ကယ်သံတွေ ကားသံတွေ ဒါတွေက ကျွန်မအာရုံမှာ ဖမ်းစားနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေရယ်။
တကယ်တော့ ကျွန်မအလုပ်ပိတ်ရက်မို့ အဆောင်နောက်ဖေးမြေကွက်လပ်လေးမှာ ခုံပုလေး တစ်လုံးပေါ် ထိုင်ကာ အသင့်ယူလာတဲ့ အရှင်ဆန္ဒာဓိကရဲ့ "တစ်ယောက်တည်းနေ တစ်စိတ်တည်းထား" တရားစာအုပ်လေးကို မဖတ်ခင် တစ်ယောက်တည်းထိုင်နေတဲ့ ကျွန်မရဲ့အတွေးပုံရိပ်တွေက အုပ်စုကွဲကာ တစ်ကောင်းတည်း ပျံသန်းနေတဲ့ ငှက်ကလေးဆီမှာ သူရှေ့ကငှက်အုပ်စုတွေကို အမှီနီးစပ်နိုင်ဖို့ ပျံသန်းနေတာ၊ ငှက်အုပ်စုတွေထဲမှာ ငှက်ကလေးရဲ့အဖေ၊ အမေ၊ ညီအကိုမောင်နှမတွေ ပါနေနိုင်သလား ဒါမှမဟုတ် သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းအပေါင်း အသင်းတွေ ပါနေနိုင်သလား သူပျံသန်းရင်း ပျံသန်းရင်း သင်းကွဲကာ ကျန်နေခဲ့ရရှာတာ။
သင်းကွဲငှက် သင်းကွဲငှက် ကျွန်မကရော ဟုတ်တယ် အဲဒီ သင်းကွဲငှက်ကလေးတွေနဲ့ ဘ၀တူနေသလား။ မိသားစု အသိုက်အမြုံလေးနဲ့ ဝေးကွာနေခဲ့တာ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ဝေးကွာနေခဲ့တာ တစ်ရက် တစ်လမှ မဟုတ်တော့ပဲ။ နှစ်နဲ့သီခဲ့ပြီ။ ကျွန်မအတွေးပုံရိပ်တွေထဲမှာ အဖွားရဲ့ပုံရိပ်၊ အဖေနှင့်အမေရဲ့ပုံရိပ်တွေ ခွဲခွါခြင်းအဖြစ် ကျန်နေခဲ့ကြသည့်အရာအားလုံးဟာ တရေးရေးနဲ့......။
တကယ်တမ်းခွဲခွါရမယ်ဆိုတော့၊ ကျွန်မချစ်တဲ့မိသားစု အသိုက်အမြုံလေးကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ခွဲခွါရမည်မသိ။ ဘုရားစင်အောက် ပုံ့ပုံ့ကလေးထိုင်နေတဲ့ အဖွားရဲ့ခြေရင်းမှာ ပုဆစ်တုတ်ထိုင်ချလိုက်ကာ အဘွားကို ကန်တော့နေရင်း တင်းထားသည့်ကြားက အတားအဆီးမဲ့မျက်ရည်တို့ဟာ လက်ဖမိုးပေါ် စီးကျနေတယ်။
“ခရီးသွားကာနီးမှာ မငိုရဘူး.မြေးရဲ့.... မျက်နှာမှာလိမ်းထားတဲ့ မိတ်ကပ်တွေ ပျက်ကုန်ပြီ။ သုံးနှစ်သုံးမိုးဆိုတာ ဘာကြာတာလိုက်လို့ နေရင်းထိုင်းရင်း ပြည့်သွားမှာပါ။ ငါ့မြေး သွားလေရာလာလေရာ လမ်းခရီး ခလုတ်မထိ ဆူးမငြိပဲ လိုရာခရီးကို ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ လျှောက်နိုင်ပါစေ။ ရော့....ဒီမှာ ငါ့မြေးတောင်ထားတဲ့ အဖွားရဲ့ခြေရာ။”
အဖိုးအဘွားရယ်လို့ ခင်တွယ်စရာ အဖေ့ဘက်က အမေတစ်ယောက်သာ ကျန်တော့သည်။ ကျွန်မ ခရီးမဖြောင့်မှာဆိုးသည့်အတွက် အဖွားငိုချင်နေလျှက် ဟန်ဆာင်ကာ မူပိုနေမှန်းသိတာပေါ့။ ကျွန်မ မမြင်အောင် ကွယ်ဝှက်သုတ်နေတဲ့ အဖွားရဲ့မျက်ရည်တွေက ကျွန်မရင်ထဲကို တဆစ်ဆစ် နာကျင်စေခဲ့တယ်။ အဖွားကမ်းပေးသည့် အဖြူရောင်ပိတ်စလေးကို ဖြန့်ကာ ကြည့်မိတယ်ဆို အဖွားရဲ့ခြေရာ၊ အဖေနှင့်အမေ့ခြေရာလေးတွေ အသီးသီးနေရာယူထားကြပုံကိုကြည့်ရင်း နယ်မှာကျန်နေခဲ့သည့်အမေ.... ကျွန်မနှင့် အကြာကြီး ခွဲနေရမယ့်ခရီးမှာ အမေလည်း လိုက်ပို့ချင်ရှာပေမယ့်။ အငယ်သုံးယောက် ကျောင်းတစ်ဖက်နှင့်မို့ လိုက်မပို့နိုင်ရှာ။ ရန်ကုန်အဖွားအိမ်ကနေ လေဆိပ်ကိုဆင်းတော့ အဖေ တစ်ယောက်သာ လိုက်ပို့နိုင်ရှာသည်။
လေဆိပ်ထဲကိုအ၀င် အဖေ ကျွန်မလက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲယူဖြစ်ညစ်ကာ
“သမီး အဖေစိတ်ချမယ်နှော်.... ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက် ဟိုရောက်ရင်ဖုန်းဆက်.. သွားသတိ.. လာသတိရှိပါ။ ငါ့သမီးသွားမှာက ရန်ကုန်မန္တလေးခရီးစဉ်မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရပ်ခြားခရီး ရေခြားမြေခြားသွားရမှာ။ ဘ၀ဟာ ဆန္ဒနှင့် ဘယ်တော့မှတစ်ထပ်ကျမနေနိုင်ဘူးဆိုတာ.. သမီးလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစား.. ဆန္ဒကို သိက္ခာနှင့် ထိန်းပါ။ အိအိထွေးနှင့်လည်းသွား အတူလာအတူ စိတ်ဝမ်းမကွဲကြနှင့် သမီးတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖေးမပါ။"”
အဖေ့အမှာစကားတွေအဆုံးမှာ.... အားလုံးကိုနုတ်ဆက်ကာ လေဆိပ်အတွင်းပိုင်းထဲကို ရောက်ရှိချိန်မှာတော့ ကျွန်မတို့နဲ့ဘ၀တူ မိန်းကလေးတွေကလည်း အများကြီးပါပဲ.... ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသူတွေကလည်း.... ခွဲခွါခြင်းကို လက်ပြနုတ်ဆက်...... ထွက်ခွါသွားရတဲ့သူတွေကလည်း မျက်ရည်စတွေနှင့်။
“မြင့်မြင့်သီ...... ဈေးသွားမလို့.... ဘာမှာအုံးမလဲ”
အိအိထွေးအသံကြားမှ ကျွန်မရဲ့ အတွေးအာရုံတွေက အိပ်ယာက လန့်ဖြတ်နိုးလာတဲ့ သူတစ်ယောက်လို. အတွေးတွေ တိကနဲရပ်တန့်ကာ......
“မမှာတော့ပါဘူး.... နင်ဘယ်သူနဲ့သွားမှာလဲ..... ငါပါလိုက်ခဲ့မယ်လေ။”
ငါးမိနစ်လောက်သာ လျှောက်ရမဲ့ ကုန်စုံဆိုင်ကိုသွားမှာမို့ ကျွန်မလည်း အတင်းဇွတ်လိုက်ဖို့ စိတ်မကူးတော့။ ဒါပေမယ့် ခုတလော အိအိထွေးကျွန်မအပေါ် ဆက်ဆံတာတွေပြောင်းလဲသွားတာကိုတော့ သထိထားမိသလို ရှိပေမယ့်။ အိအိထွေးထွးနှင့်ကျွန်မ အိမ်ချင်းကပ်ရက် ငယ်ငယ်ကတည်းက လည်ပင်းဖက်ပေါင်းလာခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ.......
ကျောင်းတက်တော့လည်း တစ်ကျောင်းတည်း အတူတက်ခဲ့ကြသလို၊ တက္ကသိုလ်နယ်မြေရောက်တော့လည်း မေဂျာတူ ယူခဲ့ကြတာပင်။ ကျောင်းပြီးသွားလို့ နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုတော့လည်း အတူတူ စာအုပ်လုပ်ခဲ့ကြတာပင်။ သူကအိမ်မှာ အငယ်ဆုံးအထွေးဆုံးမို့ သူ့စိတ်တိုင်းကျ မိဘတွေအလိုက်ထားခြင်း ခံထားရသူ။ ကျွန်မကတော့ မိသားစုမှာအကြီးဆုံးမို့ အငယ်တွေအတွက် တာဝန်ကို မေတ္တာတရားနဲ့ ဘ၀က ထိုးအပ်ခဲ့သည်မို့ ဆုလဒ်တစ်ခုအဖြစ် ထွေးပွေ့ထားခဲ့ရသည်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စလုံး စင်ကာပူထွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားကြပေမယ့်.. အခြေအနေတစ်ခုကို ရပ်မစောင့်နိုင်တဲ့ကျွန်မ.. အမြန်ထွက်ရမည့် မလေးရှားစက်ရုံ အလုပ်နှင့် ထွက်လာခဲ့ကြသည်။ အိအိထွေးလည်း ကျွန်မနှင့်အတူ လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ အိအိထွေး... .ကျွန်မအပေါ် မည်မျှပင်စိတ်ကွက်နေပါစေ။ ကျွန်မသူ့အပေါ်ခင်တွယ်ခဲ့သည့် သံယောဇဉ်ကို မည်သို့ပင် ဖြတ်တောက် ပြတ်တောက်သွားနိုင်ခဲ့မည်မဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့် ကျွန်မမှားရင် သူပြင်ခွင့်ရှိသလို . . ..သူမှားရင်လည်း ကျွန်မ ဖေးမှခွင့်ရှိသည်ဟု ခံယူထားသည်။ ဒါပေ မယ့် အချစ်နှင့်ပါတ်သတ်လာရင် အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေတွေက ရန်သူဖြစ်တတ် ကြပါသလား။ တ၀မ်းထဲ ဆင်းခဲ့ ကြတဲ့ ................ညီအကိုမောင် နှမတွေက သူစိမ်းဆန်သွားခဲ့ ကြပါသလား မှားနေတဲ့လမ်းတွေကို လျှောက်ရင် လမ်းကြောင်း မှန်အောင်တည့်ပေးသင့်ပါသလား။ သူ့အပေါ် ကျွန်မထားခဲ့သည့် စေတနာမေတ္တာ တရားဟာ........ ညီအစ်မထက် မသာနိုင်ခဲ့ရင်တောင်.......ထိုထက်လျော့မသွားနိုင်။ သူအသိအမှတ်မပြုနိုင် ခဲ့ရင်တောင်ကျွန်မရဲ့ မေတ္တာ၊ စေတနာတွေကို လျစ်လျှူရူ့မဖြစ်သင့်။ခုတော့ အိအိထွေးတစ်သက်လုံး မွေးခဲ့သည့် ကြက်ကို တစ်မနက်တည်း နှင့်ရိုက်စားပြစ်ရက်သည်။
တက္ကသိုလ် ကျောင်းမှာ ရည်းစားစာလိုက် အပေးခံရတာကို ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင် အရှက်ကြီးရှက်နေခဲ့ရ သူက ညဉ့်နက်သန်းခေါင်း ဘယ်ကလာမှန်းမသိတဲ့ ဖုန်းတွေကို လက်ခံစားကားပြောတတ်လာသည်။ "တဟိဟိ............ တခိခိ" အနာဂါတ်အကြောင်း တစ်ခုမှမပါ။ ဟီရိသြတ္တပ္ပ အရှက်အကြောက်တရား ကင်းမဲ့သည့် စကားလုံးတွေ ထဲ၌သာ အရည်ပျော်ဝင်နေခဲ့သည်။ တစ်ဖက်က လည်းပါးစပ်အရသာ၊ နားအရသာခံပြီး။နဖူးကချွေးခြေမကျအောင် မဟုတ်ပေမယ့်ခြေတွေ၊ လက်တွေအကြောဆွဲအောင်လုပ် အားနှင့် ရင်းနှီးကာရလာခဲ့သည့်ပိုက်ဆံတွေကိုလေထဲ မှာအရည်ဖျော် ပြစ်နေကြသည်။ ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုရလျှင် မျောက်လက်ထဲ သေနတ်ထည့် ပေးလိုက်သလို တရပ် စပ်ဆက်နေကြတော့သည်။ နားချိန်မှာနားဖို့ ကျွန်မက ပြောတော့ "နင့်မှာဘာခံစားမူ့မှ မရှိဘူးတဲ့"ကျွန်မခံစားမူ့မဲ့ ခဲ့တာမဟုတ်ပါ။ ခံစားတတ်မူ့တွေကို ဘောင်ခတ်နေခဲ့တာ။
တစ်နေ့တော့ဖုန်းတစ်လုံးကနေ နှစ်လုံးဖြစ်လာတယ်။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းလဲလာတယ်။
ဖားတုလို့ ခရုခုန်ချင်နေတဲ့သူ့ကို ကျွန်မ လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်သည့် အဆုံးမှာ........... အိအိထွေးကို အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
သိလိုစိတ်ဖြင့် မေးလိုက်မိ၏။ သူနှင့် ကျွန်မစားအတူ၊ သွားအတူရှိခဲ့ကြသည်။ စက်ရုံ(night...shift) နိုက်ရှစ်.........်(morning.shift) မောနင်းရှစ်ခွဲတော့ အိအိထွေးက မောနင်းရှစ်၊ ကျွန်မက နိုက်ရှစ်ထဲ ပါသွားခဲ့သည် သူနှင့်........ ကျွန်မ ပိတ်ရက်ဆုံနို့ဖို့က တစ်ခါတစ်ရံ သာဆုံတတ်ခဲ့ကြသည်။ မောနင်းရှစ်နှင့် နိုက်ရှစ် အကူးအပြောင်း အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာအိအိထွေးပြောင်လဲနေခဲ့သည်။
“ဘာဖြစ်လို့ ယူထားရတာလဲ။ အိအိထွေးရယ်..နင့်မှာလည်းဖုန်းရှိ နေတဲ့ဟာကို”
“သူက စေတနာနဲ့ ပေးတာကို ငြင်းလို့ကောင်းမလား။ ဒီပစ္စည်းလေးယူတာဘာဖြစ်သွားမှာမို့လဲ”
“အေး.. ဘာမှဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးဆိုတာ ငါနားလည်ပါတယ်။ စေတနာဆိုတာ တွေကိုလည်း ငါလက်ခံတယ်။ ဒါပေ မယ့် .......နင်သူများဆီက ယူပြီးသွားရင်။ ပြန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အသိနင့် ခေါင်းထဲမှာ မဖြစ်မနေ ထည့်ရတော့မယ်။ စေတနာ ဆိုတာလိုအပ်မှလက်ခံ တာပဲကောင်းပါတယ်။ မလိုအပ်ပဲ စေတနာနောက်ကွယ်က အရောင်တွေ ကြား မှာနင်သာယာမိန်းမူးမှာ ဆိုလို့ငါသတိပေးတာပါ။ သူများ နှာခေါင်းပေါက်နှင့် အသက်ရှင်ရတာထက်. ကိုယ့်........ နှာခေါင်းပေါက်နှင့် ရသလောက်ရူရတဲ့ အရသာကိုနင်မက်မောစမ်းပါ။”
ကျွန်မ စကားပင်အဆုံး မသတ်သေး။ ..............အိအိထွေး ဒေါသအရှိန်နှင့် စက်ကနဲ ကျွန်မ မျက်နှာကို လက်ညိုး ငေါက်ငေါက်ထိုးလျှက်။
“မြင့်မြင့်သီ ............နင့်အမြင်ကလေး တစ်ထွာလောက်နဲ့ သူများတွေကို ဘောင်ခတ်ပြီး မကြည့်ပါနဲ့။ နင့်ကို နင်ပဲ ဘောင်ခတ်ထား လို့ရမယ်။ နင့်နဲ့ ငါစိတ်တူကိုယ်တူ ရှိခဲ့ကြတယ်လို့ ထင်ထားတာ။ နင်ကအမြင်တွေ ကျဉ်းမြောင်း ပြီးတစ်ဖက်စွန်းရောက်နေသူ။ငါမှားရင်ငါပဲခံရမှာ နာဘာဝင်ပူပင်စရာမလိုဘူး။”
စေတနာတွေပုလင်းကွဲ လောက်တောင် အရောင်ပြန်မဟပ်ခဲ့။ ကျွန်မရဲ့ စေတနာ၊မေတ္တာတွေကိုသဲထဲသွန်လိုက် ရင်တောင်အရာ ထင်ကျန်ခဲ့အုံးမည်။ ခုမှတွေ့ဖူးသည့် လူတစ်ယောက်၏ စေတနာတွေကို ကိုးကွယ်လို့...... ဘာမှ ၀င်ပူပင်စရာ မလိုအပ်ဘူးဆိုသည့် စကားလုံးတွေကြားမှာ ကျွန်မရဲ့ စေတနာတွေ အချည်းအနှီးဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ထို အချိန်ကစလို့ အိအိထွေးနှင့် ကျွန်မကြား ဆက်ဆံရေးတွေ ခပ်စိပ်စိပ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အိအိထွေး ခြေလှမ်းတွေ အ ရင်ကထက်ပို သွက်လာခဲ့တယ်။ အိအိထွေး ကိစ္စနှင့် ပါတ်သတ်ပြီး ကျွန်မကိုမည်သူမှ အရောတ၀င်မရှိကြ။ ကျွန်မ ကအမြင်ကျဉ်းမြောင်းသူ အရာရာကိုစံချိန်စံညွန်းတွေနှင့် ဘောင်ခတ်ထားချင်သူတဲ့လေ။ ထိုသူတွေထဲက ခိုင်မာ နှင့် ခိုင်ဇာတို့ ညီမနှစ်ယောက် ကတော့အနေအထိုင် အေးဆေးသလို၊ သဘောထားလည်း ပြည့်ဝကြ၏။ ကျွန်မ အပေါ်ငယ်ပေါင်း ကြီးဖော်တွေလို တိုင်ပင်နှီးနှော်ရင်ဖွင့်ခဲ့ကြသည်။ ငယ်ငယ်ကတည်းကလည်ပင်း ဖက်ကာ........ ပေါင်းလာခဲ့သည့် အိအိထွေး ကျွန်မ အနားမှာလစ်ဟာသွားခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မသူ့ကိုဥပက္ခာပြုမထားရက်။
“အိအိထွေး ညဘက်တွေ ကိုအောင်ကြီး နင့်ကိုလာခေါ်တယ်ဆို”
“ကိုအောင်ကြီးနှင့် ငါချစ်သူတွေပဲ ဘာထူးဆန်းလို့လဲ”
“အေး..ဟုတ်ပါတယ်။ နင့်နဲ့ သူချစ်သူတွေ ဖြစ်ကြတာ မထူးဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နင့်သူ့အကြောင်း ဘယ်လောက် သိထားပြီးပြီလဲ”
“သူ့အကြောင်း ဘာသိစရာလိုလို့လဲ။ မလေးရှားနဲ့ ရန်ကုန်သွားလိုက် လာလိုက်။ ဒီမှာအေးဂျင့်လုပ်နေတယ်”
“နင့်ကို အေးသင်းတို့က ပြောပြမထားဘူးလား။ သူ့မှာ ရန်ကုန်မှာမိန်းမရှိတယ်။
ကျွန်မ သူနာကြင်စေမယ့် စကားလုံးမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ရင်မပြောချင်ပါ။ မပြော မဖြစ်အခြေအနေမို့ သာပြော လိုက်ရ သည်။ ကျွန်မအပေါ် ဒေါသအငွေ့တွေ... နှင့်ကြည့်ခဲ့ဖူးသည့် အိအိထွေးရဲ့ မျက်လုံးတွေ အရောင်ဖျော့ လာတာကို
တော့သတိထားမိလိုက်သည်။ အတန်ငယ် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေရာမှ အိအိထွေး စကားဆက်လေတယ်။
“ကိုအောင်ကြီး ကိုငါမေးပြီးပြီ။ သူ့မှာမိန်းမမရှိဘူးလို့ ပြောတယ်။”
“နင့် အရွယ်ကပင်လယ်ထဲမှာ ရေမရှိဘူးဆိုတာကို လိုက်ယုံရမဲ့ ကလေးသူငယ်မှမဟုတ် တော့ပဲ။ သေချာအောင်မေးကြည့်အုံးပေါ့”
ကျွန်မ ထိုသို့သာ ပြောနိုင်ခဲ့သည် ဘူးတစ်လုံး ဆောင်ခြင်းကို ယုံကြည် လွယ်လွန်းခဲ့သည့် သူ့အတွက် ကျွန်မရှေ့ ဆက်စရာမရှိတော့။
(night..shift) ဆင်းထားသည်မို့မျက်လုံးတွေကျိန်းစပ်ကာဖန်တွတ်နေခဲ့သည်။ခြေ၊လက်တွေပင်မသယ်ချင်တော့ တစ်ကိုယ်လုံး ကျောက်ချထားသည့်နှယ် လေးလံကာ ခြေလက်ပင် မဆေးနိုင် အိပ်ယာထဲ ခေါင်းတိုးဝင်ကာ အိပ်လိုက်မိတော့သည်။ အရင်နေ့တွေကဆို ထမင်းအိုးလေးတစ်လုံးတည်။ ခြေ၊လက်ဆေးပြီးကာမှ အိပ်ယာဝင်ဖြစ် ခဲ့ သည်။ အိပ်ယာက နိုးမှ ရေချိုး၊ ဘုရားရှင် ခိုးပြီး။ ကြက်ဥလေး တစ်လုံး ကြော်ကာ စားသောက်ပြီးတယ်ဆို စက်ရုံ ဖယ်ရီကား အလာကိုစောင့်ရသည်။ ဒီနေ့တော့စက်ရုံက နေအပြန် ဖယ်ရီကားပေါ် မှာလည်း တစ်လမ်းလုံးလိုက် ပါ ငိုက်မျဉ်းလာခဲ့သည်။ အရင်နေ့တွေကလို စကားပြောဖော် ခိုင်မာတို့ ညီမနှစ်ယောက်ကလည်း ဒီနေ့မှ အလုပ် ကပိတ်သည်။ ခါတိုင်းနေ့တွေထက်ထူးထူးခြားခြား စိတ်တွေလေးလံနေမိသည်။ (night-shift)နိုက်ရှစ်ဆင်းထား လို့နေမှာပါပဲ ဟုဖြေတွေးကာ မှေးကနဲ့အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်။
မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားရုံပဲ ရှိသေးသည်။ အသံတွေကြား နေရပေမယ့် မျက်လုံးတွေက စေးကပ်ပြီးဖွင့်လို့မရ။ ခြေ ထောက်တွေကို ဆွဲလှုပ်ကာ ခေါ်နေမှန်း သိပေမယ့် အိမ်မက် လေလားေ၀၀ါးဝါး။ နောက်တစ်ခွန်း အသံမြင့်ကာ ခေါ်လိုက်မှ..........
မျက်လုံးတွေ ပွတ်သပ်ကာ ထထိုင်လိုက်တော့ ခိုင်မာတို့ ညီမနှစ်ယောက် ကျွန်မ အနားမှာမျက်နှာတွေ ကလည်း မကောင်းကြ။ ဟိုဘက်တစ်ယောက် ဒီဘက်တစ်ယောက် ထိုင်နေကြသည်။
“အိအိထွေး....ဆေးရုံတင်ထားရတယ်။ ညကအရေးပေါ် တင်လိုက်ရတာ။abortion (အဘော့(ထ်)ရှင်း) ဖြစ်တာ။ သူလုပ်ထားတာကကြာပြီ။ အရှိန်မပျက် အလုပ်ဆင်းနေတော့ အလုပ်ဒဏ်ပါရောသွားတာဖြစ်မယ်။”
ကျွန်မ နားအနား အဏုမြူဗုံး တစ်လုံးကပ်ကာ ခွဲလိုက်သလိုပင်။ နားနှစ်ဖက်ကို လက်နှင့်အုပ်ကာ မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်ရသည်။
“ငါ မနက်က အေးသင်း အလုပ်ဆင်းတာမြင်လို့ အိအိထွေး လည်းဆင်းတယ်ထင်တာ”
“အေးဂျင့်က ဘယ်သူမှ အလိုက်မခံဘူး။ အေးသင်းလိုက်မယ် ပြောတာ ဟိုမှာ နက်စ်တွေရှိတယ်မလိုအပ်ဘူးတဲ့”
“အေးသင်းပြောတာတော့..ကိုအောင်ကြီး မြန်မာပြည်ပြန်သွားတာကြာပြီတဲ့။ သူ့မိန်းမ ကလေးမီးဖွားမှာ မို့ပြန်သွားတာလို့ပြောတာပဲ။ အေးဂျင့်က ...အိအိထွေး ကိုပြန်ပို့မယ် လို့ပြောတယ်မနက်စောစောက အားလုံးကိုလာဆူသွားတယ်။”
ရသာကိုမှင် ဆင်သေကို စီးပါလို့......အပျော်ကြီးပျော်ခဲ့တဲ့ ကျီးမိုက် ပင်လယ်ပြင်ထဲကမ်းမဲ့ခဲ့ပြီ။ အတန်တန် တားခဲ့ သည့်ကြားက မှားယွင်းစွာ မိုက်ခဲ့သည်။ ဘ၀ အလှည့်အပြောင်းတွေက ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကွက်တွေကြည့်နေရ သလို ပင်မြန်ဆန်လွန်းလှသည်။
“ငါတို့ ညီမနှစ်ယောက်လည်း နက်ဖန်နှစ်နာရီ လေယာဉ်နဲ့ မြန်မာပြည်ပြန်ရမယ်”
"ဘာ....ဘာဖြစ်လို့ ရုတ်တရက်ကြီး ပြန်ရမှာလဲ"
ကျွန်မ စကားတွေပင်... ပုံမှန်ထွက်မလာတော့။ အမောဆို့နေသည့် လူတစ်ယောက်ကို ရင်ဝ ဆီးကာစောင့် ကန် လိုက်သလိုပင်။
“ငါတို့လည်း မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ် နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် ဆေးစစ်လာခဲ့တာ ပြန်မဲ့နှစ်ကြမှ ဆေးကျတယ်။
သူများတွေကတော့ နိုင်ငံခြားဆိုတာ တစ်ခေါက်လာဖို့ မလွယ်ဘူးတဲ့။ အို(အိုဗာစတေး)ဖို့ ပြောကြတယ်။ ငါတို့မှာကအသိလည်းမရှိဘူး။”
ရုတ်တရက် သူတို့ကိုအားပေးဖို့ စကားလုံးရှာဖွေမရ။ ကျွန်မ ဆွံ့အတိတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်။ သူတို့ မျက်နှာတွေမှာ ကျွန်မကို အားကိုးတကြီးနှင့် ကြည့်နေမှန်း အထင်းသားမြင်နေရသည်။
“ငါပြောမဲ့ စကားတွေကို နင်တို့ လက်ခံမှာလား။ လက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ ငါ့မှာနင်တို့ အတွက်စဉ်စားလို့ရမဲ့ အဖြေရှိတယ်။”
“ငါတို့ နင့်စကားကို ဘယ်တုန်းက ငြင်းပယ်ခဲ့ဖူးလို့လဲဟာ။ ဒါကြောင့်နင့်ကိုတိုင်ပင်တာပေါ့”
“ဘ၀မှာ တစ်ခါတစ်ရံ အရှုံးနှင့်ရင်ဆိုင်ရတတ်၏။ ဒါပေမယ့် တစ်သက်လုံး လိပ်ပြာလှုံ၏တဲ့။ ငါတို့.... မိန်းကလေး တွေမှာ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မောင်ဘချစ် လုပ်လို့မရဘူး။အို(အိုဗာစတေး) ဆိုရင်လည်း နင်တို့ ညီအစ်မမှာအားကိုစရာ
ညီကိုမောင်နှမလည်းမရှိဘူး။ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း တကယ်တမ်း ပြဿနာ ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းသူတို့တွေ လည်းမ ကယ်နိုင်ဘူး။ နင်တို့ညီအစ်မ မြန်မာပြည်မှာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့မဟုတ်တာ။ အိုမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်နင်တို့ ညီ အစ်မမှာခြေ၊လက်နှစ်ဖက် အကောင်းတွေရှိသေးတယ်။ နှစ်ယောက်ပေါင်းရင် ခြေ၊လက်ရှစ်ဖက် ဘ၀ကို လိပ်ပြာ သန့်သန့်နှင့် ဖြတ်သန်းလိုက်စမ်းပါဟာ။ မနက်ဖန်ပြန်ဖို့...........ပြင်ဆင်တော့”
ကျွန်မစ ကားသံတွေ အဆုံးမှာ ခိုင်မာတို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက် မျက်နှာတွေ ၀င်းလက်သွားကာ ခေါင်းငြိမ့်အတည်
ပြုခဲ့ကြလေသည်။ ခိုင်မာတို့ ညီအစ်မ နှစ်ယောက်ကို ကြည့်ကာဝမ်းသာ ပီတိ မျက်ရည်စို့ရသည်။ အိအိထွေး..... ကျွန်မရဲ့စေတနာ မေတ္တာတွေကို နားလည်ရင် မည်မျှကောင်းလိုက်မလဲ။ ကျွန်မ ဆက်အိပ် လို့မရတော့ သည်မို့ ခိုင်မာတို့ ညီအစ်မ နှစ်ယောက်ကို ပစ္စည်းတွေ ကူးသိမ်းပေးနေမိသည်။ သူတို့ ညီမနှစ်ယောက် မျက်နှာမှာလည်း စိတ်အားငယ်နေတာတွေမရှိတော့........မိသားစုနှင့်ပြန်တွေ့ရတော့မည့် သူတို့ရဲ့ အပျော်တွေပင်.....ကျွန်မထံကူး စက်လာခဲ့ရသည်။ မြန်မာပြည် ပြန်ဖို့ နှစ်လသာ လိုတော့သည့် ကျွန်မလည်း သူတို့ ညီအစ်မဆီက နေရပ်လိပ်စာ တောင်းထားလိုက်သည်။ ကျွန်မ လိပ်စာကိုလည်း သူတို့ ညီအစ်မကို ပေးကာ အရောက် လာလည်ဖို့ မှာကြားရင်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဖက်ကာ ငိုမိကြတော့သည်။
ညနေ ၆နာရီထိုးပြီမို့.................နိုက်ရှစ ပြန်ဝင် ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရတော့သည်။ ညစာကို(canteen) ကဲန်တင်းန် မှာပဲ တစ်ခုခုဝယ်စားလိုက်တော့ မည်ဟုဆုံးဖြတ်ကာ............အ၀တ်အစားလဲပြီး စက်ရုံ ဖယ်ရီကား မလာခင် အ ဆောင်နောက်ဖေးဆီထွက်ကာ.......ညနေခင်းရဲ့ လတ်ဆတ်သော လေနုအေးလေးကို .....................အားပါးတရ ရူရှိူက်ရင်း ဆီအုန်းတောထက်ဆီက ပျံသန်းနေကြတဲ့ သင်းကွဲငှက် တွေကိုကြည့်ကာ ......................သင်းကွဲငှက် ကလေးတွေ မုန်းတိုင်းဒဏ်မ ကင်းဝေးကာ...........အပြစ်အနာဆာမဲ့ ချစ်သော မိသားစုတွေနှင့် ပြန်လည် ဆုံစည်း နိုင်ကြပါစေလို့..............................ကျွန်မ တိတ်တိတ်လေး ဆုတောင်းပေးနေမိတော့တယ်။
Posted by ခိုင်နုငယ် at 8:37 PM 42 comments: Links to this post
"Thank You" ခင်ဗျားကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး
Posted by ခိုင်နုငယ် at 6:31 PM 30 comments: Links to this post
၁။ မိခင်အချစ် သို့မဟုတ် ကြင်နာသော အချစ်
( Motherly love or Tender love )
၂။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်သောအချစ် ( Self- love)
၃။ ဘ၀ကို ချစ်သောအချစ် ( Love of life)
၄။ ညီအကိုစိတ် သို့မဟုတ် ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဖြင့် ချစ်သော အချစ် (Brotherly love)
၅။ ဘုရားကို ချစ်သောအချစ် ( Love of God)
၆။ ကိလေသာအချစ် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်သောအချစ် ( Passionate live or Erotic love )
ငယ်ထူးဆန်းနေသယောင်ရှိတယ်။ အဲဒီ ၁၅၀၀ နဲ့ ၅၂၈ ဂဏန်းတွေ ဘယ်လိုရသလဲ။
၁။ တစ်ထောင့်ငါးရာ ကိလေသာစိတ်သဘာဝ
ကိလေသာဆယ်ပါးကို အခြေခံတယ်။ အဲဒီ ကိလေသာစိတ်တွေ ကတော့ လောဘလို့ခေါ်တဲ့ အာရုံ၌ကပ်ငြိခြင်း(တပ်မက်ခြင်း) ဒေါသဆိုတဲ့ ကြမ်းတမ်းခြင်း၊ သည်းမခံနိုင်ခြင်း၊ မောဟဆိုတဲ့အာရုံ၏ သဘောကိုဖုံးလွှမ်းခြင်း (တွေဝေခြင်း) မာနဆိုတဲ့ထောင်လွှားခြင်း၊ ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ မှားသောနှလုံးသွင်းခြင်း(အယူ)၊ ၀ိစိကိစ္ဆာ ဆိုတဲ့ အာရုံကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း၊ ထိနဆိုတဲ့ စိတ်၏မခန့်ခြင်း၊ ငိုက်မြည်းခြင်း၊ ဥဒ္ဒစ္စဆိုတဲ့ စိတ်၏မငြိမ်သက်ခြင်း၊ ပျံ့လွင့်ခြင်း၊ အဟီရိကဆိုတဲ့ ကာယဒုစရိုက် ပြုရခြင်း၌ မရှက်ခြင်း၊ အနောတ္တပဆိုတဲ့ ကယဒုစရိုက်ပြုရခြင်း၌မလန့်ခြင်း တို့ဖြစ်တယ်။
အဲဒီက်လေသာ(၁၀)ပါးနဲ့ ရုပ်စုစုပေါင်းနဲ့ မြှောက်ရပါတယ်။ ရုပ်စုစုပေါင်းဆိုတာက လက္ခဏာရုပ်(၄)ခု၊ နိပ္ပန္နရုပ် (၁၈)ခု၊ နာမ် ၅၃ ပါး အဲဒါတွေရဲ့ အစုအပေါင်းပေါ့။ ပေါင်းလိုက်ရင် ၇၅ ရပါတယ်။ အဲဒီ ၇၅ ကို ၁၀နဲ့မြှောက်တော့ ၇၅၀ ။အဲဒီမှာမှ အဇ္ဈတ္တသဏ္ဍာန်၊ ဗဟိဒ္ဓ သဏ္ဍာန် ရယ်လို့ နှစ်ပါးရှိတဲ့အတွက် ၂ နဲ့ထပ်မြှောက်တော့ ၁၅၀၀ ရတာပါပဲ။ ဒါကို ၁၅၀၀ ကိလေသာလို့ခေါ်တာပါ။
၂။ ၅၂၈ မေတ္တာသဘာဝ
မေတ္တာဆိုတဲ့အတိုင်း မေတ္တာပို့ရာမှာ ရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့ စိတ်သဘာဝ တစ်ခုပါပဲ။
မေတ္တာပို့တဲ့နေရာမှာ ပုဂ္ဂိုလ် (၁၂)ယောက်ကိုပို့ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ သဗ္ဗေသတ္တာ၊ သဗ္ဗေပါဏ၊ သဗ္ဗေဘူတာ၊ သဗ္ဗေပုဂ္ဂလာ၊ သဗ္ဗေအတ္တဘာဝ ပရိယပ္ပန္န၊ သဗ္ဗေဣိထိယော၊ သဗ္ဗေပုရိသ၊ သဗ္ဗေအရိယာ၊ သဗ္ဗေအနရိယာ၊ သဗ္ဗေဒေ၀ါ၊ သဗ္ဗေမနုသာ၊ သဗ္ဗေ၀ိနိပါနိကာ တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ် ၁၂ ပါးကို မေတ္တာ ၄ ပါးပို့တယ်။ အဝေရာဟောန္တု၊ အဗျာဘစ္ဆာဟောန္တု၊ အနီဃာဟောန္တု၊ သုခိအတ္တာနံ ပရိဟရန္တု...တဲ့။ ဒီတော့ ၁၂ ပါးနဲ့ ၄ ပါးမြှောက်လိုက်တဲ့အခါ ၄၈ ပါးရတယ်။ ဒါက အရပ်မျက်နှာ အရှေ့အနောက်ကို မရည်မှန်းပဲ ပို့တဲ့ “အနောဒိတ္တာ” မေတ္တာ အပါးခေါ်တာပေါ့။ အဲဒါကိုမှ ထပ်ပီး အရပ်မျက်နှာတွေနဲ့ခွဲပြီး ပို့လိုက်မယ်ဆိုပါတော့။ အရပ် ၁၀မျက်နှာရှိပါတယ်။ အရှေ့၊အနောက်၊တောင်၊ မြောက်၊ ခေါ်တဲ့လေးမျက်နှာ၊ အရှေ့တောင်၊ အနောက်မြောက်၊ အရှေ့မြောက်၊ အနောက်တောင်ဆိုတဲ့ ထောင့် ၄ မျက်နှာ၊ အထက်နဲ့ အောက် ၂ မျက်နှာ ၊အားလုံးပေါင်း အရပ် ၁၀ မျက်နှာပါ။ ဒီလိုအရပ်မျက်နှာ ရည်မှန်းမှု ၁၀ ခုနဲ့စောစောက ၄၈ ကိုမြှောက်လိုက်တော့ ၄၈၀ ရပါတယ်။ အဲဒီ ၄၈၀ ကိုမှ မရည်မှန်းဘဲပို့တဲ့ ၄၈ ပါးကို ထပ်ပေါင်းကြည့်လိုက်တော့ ၅၂၈ ရယ်လို့ ရလာပါတယ်။ အဲဒါ ၅၂၈ သွယ်မေတ္တာလို့ ခေါ်ပါတယ်။
Posted by ခိုင်နုငယ် at 1:36 AM 11 comments: Links to this post
Labels: (Tag )ပိုစ့်